Baarlamanka Carabta oo soo fara-geliyey darbiga Kenya ay ka dhiseyso xuduuda + Go’aan culus | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Baarlamanka Carabta oo soo fara-geliyey darbiga Kenya ay ka dhiseyso xuduuda + Go’aan culus
Xildhibaanada baarlamaanada carabta oo kulan ku yeeshay magaalada Qaahira ee dalka Masar ayaa ka dooday arimo ay kamid yihiin dhismaha darbiga dowlada Kenya qorsheyneyso iney ka dhisto xuduuda Somalia kala dhaxeyso.
Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa, oo kamid ah gudiga arimaha dibada ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay iney la tageen shirka ka dhacay magaalada Qaahira ee dalka Masar qorshe cad oo ku saabsan dhismaha darbiga Kenya ee xuduuda Soomaaliya.
Xildhibaanada baarlamaanka carabta ayuu sheegay iney dood dheer ka yeesheen arintaasi ayna ka hor yimaadeen qorsha dowlada Kenya.
Sidoo kale xildhibaanka ayaa sheegay in baarlamaanka carabta uu ka xumaaday dhibaatada dadka Kenya kala kulmaan cidamada Alshabaab, laakiin aysan suurto gal aheyn in darbigaasi la dhiso, sida uu sheegay.
Kenya waxay dooneysaa iney darbi ku dhawaad 700 km ah ka dhisto xuduuda dhanka Soomaaliya, waxaana hadda ay dhul balaarsi ka wadaa gobolka Gedo, gaar ahaan degmada Beledxaawo.
One thought on “Baarlamanka Carabta oo soo fara-geliyey darbiga Kenya ay ka dhiseyso xuduuda + Go’aan culus”
17/06/2015 at 15:13
Kenya haday damacday in dhul ka Somalia wale Kenya wa lo bq